Ambongadiny voajanahary voajanahary hypoallergenic azo antoka soa aman-tsara fafafa ny tavy mando biby ho an'ny alika sy saka Mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Anaran'ny vokatra: 200 manisa mamafa safo lena
Model Model: QMSJ-324
Akora ilaina: Aqua, Glycerol, Methylisothiozelinone, lodopropynyl Butylcarbamate, Glycerol, disodium EDTA, AloeBarbadensisleafJuice, Tantara-20, Allontion, RetinylPalmitate, Menaka katsaka, Lanolin, LsopropyIMYRISTATE, sheo butter
Habe: 5 "x 7" santimetatra (12cm x 17.7cm)
Manisa isaky ny boaty: 200 isa
Fofona: Shea dibera
MOQ: Boaty 5000
Voajanahary voafafa io safo-drano lena io ho an'ny alika. Tena sariaka amin'ny biby izy io ary tsy handratra ny tananao rehefa mampiasa azy ianao. Izy io dia afaka manafoana ny famaohana lena matetika amin'ny biby fiompy. Ity famafana ity dia famafana tsy maintsy ananana ho an'ny fianakaviana rehetra izay tia biby fiompy sy mitazona biby fiompy. Ny biby fiompinao dia ho tsara tarehy sy mahafinaritra kokoa eo ambany fikarakaranao tsara.
* Hamafa ny biby fiompy hypoallergenic
Sasao moramora ny palitao sy ny tongotr'akoranao raha ilaina izany mba hamelombelona sy hadio.
1. sokafy misokatra ary esory aloha ny famafana avy eo afovoan'ny horonan-taratasy.
2. Hisintona hamafa ny lavaka kely eo afovoan'ny sarom-bilany. Rehefa misintona eraky ny lavaka ianao dia hamafa ny famafana manaraka ary ho vonona hampiasaina.
3. Manomeza tosika haingana hampisarahana ny famafana iray amin'ny iray manaraka. Eo anelanelan'ny fampiasana dia sarony mihidy tsara ny sarom-baravarana mba hitazonana ny famafana.
4. Mitahiry amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 50 sy 90F. Ny fitehirizana ny temperoture tafahoatra dia mety mametra ny fahombiazan'ny vokatra.
* Mampiasà ::
√ MIARA-MIASA √ sofina √ hoditra
√ PAWS √ Nify √ COAT
Aza mifandray amin'ny maso. Aza miditra amin'ny ankizy. Tsy natao hampiasa olombelona. Aza avela hihinana biby ny biby. Aza ampiasaina amin'ny hoditra vaky na may. AZA MOMBA.
Teo aloha: Ataovy madiodio mora foana ny fanadiovana kiraro fotsy sy hoditra
Manaraka: Ekeo ny mpanadio fitaratra fiara namboarina mamafa ny fanadiovan-koditra
Anti-allergy Cat Wipe
Famafana fanoherana ny allergy ho an'ny alika
Hamafa ny mason'ny saka tsara indrindra
Famafazana nify tsara indrindra ho an'ny saka
Fafao alika tsara indrindra
Famafana alika ho an'ny fivalanana
tena mamafa namafa ny biby fiompy
Safo-drano lena azo antoka ho an'ny alika
Fafao azo antoka ho an'ny saka
Orinasa ambongadiny misy boaty 100 manadio biby fiompy ...